Governer အကြောင်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
Thread: Governer အကြောင်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
01-01-2009 05:01 PM #1
projectတခုမှာ test run သွားလုပ်တုန်းကဖြစ်ပါသည်။စက်တွေမောင်းနေတုန်း gen set ကအသံတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်၍(ဖရီကွန်စီရော၊ဗို့ရောခုန်နေသောကြောင့်)စက်များရပ်လိုက်ရပါသည်။ gen set က cummins eng နဲ့တွဲထားတာပါ။ကျွန်တော်က fuel filter ကြောင့်ဟုယူဆသောကြောင့်လဲခိုင်းပြီးပြန် run လဲမထူးခြားပါ။ကျွန်တော့အထက်ကိုပြောပြသောအခါမှတ်ချက်ကို fuel pump ကြောင့်ဟုရေးပေးလိုက်ရာဆရာကအသံတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်ခြင်းသည် governor ကြောင့်ုပြောပါသည်။
ကျွန်တော် governor အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။၀န်ခံရရင်Alternator side မှာလား engine side မှာလားဆိုတာတောင်မသဲကွဲဖြစ်နေသောကြောင့်တတ်သိနားလည်သောဆရာကြီးများရှင်းပြပေးစေချင်ပါသည်။
The Following2Users Say Thank You to တာရာပွလေး For This Useful Post:
iPod, Zarni Linn
01-02-2009 06:51 PM #2
ပြန်စာ -> Governer အကြောင်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
၁။ Engine တခု မှာ အလုပ် (load) များလာ ရင် ဆီ(Fuel)များများလိုပါတယ်။
၂။ Load များလာရင် Engine လည်ပတ်နုံး နှေးသွားပါတယ်။
အထက်ပါ ၂ ချက် က governer ရဲ့ အခြေခံပါ။
governer က Auto ဆီ(Fuel) အနည်းအများ ချိန်ပေးပါ တယ်။
Simple governer is constructed by centrifugal force and counter spring force.
Adjusting governer means adjuxting the counter spring force.
there will be2wegihts and if speed is fast weights will go far away from spindle by centrifugal force. that will be counter by spring. fast response and slow depends on the adjustment of that counter spring.
if speed is slow because of higher load (2), centrifugal force is going down and mechanism will rotate the plunger in fuel injector to higher fuel delivery postion.
That is brief function of of governer.
Dont adjust your self send to specialist. Mecahnics never do it himself. Injector ချိန်တဲ့ shop တွေရှိပါတယ်။
The Following2Users Say Thank You to Nay Win For This Useful Post:
01-02-2009 09:44 PM #3
u can read about governor here...
but its explain about Mechanical Governor and Pneumatic Governor.
here for Hydraulic Governor.
i&#039;m sorry! ;D i can&#039;t find the link for the Electric Governor ;D ;D
ကိုနေဝင်းရှင်းပြသလိုပဲ governor တစ်ခုကို centrifugal force and counter spring force တို့ကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ governor ကို machine တော်တော်များများမှာ သီခြားရည်ရွယ်ချက်အလိုက်အသုံးပြုပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ fluid ပေါ်မူတည်ပြီးလဲ governor အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုလောလောဆယ် ကိုးကားစရာစာအုပ်မရှိတဲ့အတွက် ကျောင်းတုန်းကသင်ခဲ့တာကိုမှတ်မိသလောက်ပြောပြပေးပါမယ်။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါပါ။
ပထမဦးစွာ weight ရှိတဲ့အရာတစ်ခုကို ကြိုးချည်ပြီး လွှဲကြည့်ပါ။ အဲဒီအလေးဟာ ဗဟိုကနေခွာပြီး အဝေးကိုထွက်ခွာဖို့ ကြိုးစားနေသလို အပေါ်ကိုလဲ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ လည်ပတ်နေသောအရာအားလုံး Right Hand Rule ကိုလိုက်နာကြပါတယ်။
အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။ ဘယ်ဘက်ကပုံမှာ ball နှစ်လုံးကို arm နဲ့ချိတ်ထားပါတယ်။ အပေါ်မှာ arm အသေးနှစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ arms အသေးနှစ်ခုဆုံတဲ့နေရာဟာ ရွေ့လျားနိုင်သော(movable) slide ပါ။ အဲဒီ joint ကနေ ညာဘက်က ပုံမှာပါတဲ့ valve အဖွင့်အပိတ်ထိကို mechanism link တွေနဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။ ပုံနှစ်ခုကြားက arm အရှည်ရဲ့အလယ်က သစ်သားဟာ center of moment ပါ။ ဘယ်ဘက်အစွန်းကနိုမ့်ရင် ညာဘက်အစွန်းက မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ညာဘက်အစွန်းက မြင့်တက်လာတာနှင့်အမျှ valve ဟာပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်ကပုံရဲ့အောက်ဆုံးမှာ pulley groove ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အဲဒီ pulley ကို rotation တစ်ခုပေးလိုက်ရင် ball နှစ်လုံးဟာ လည်ရင်းအပေါ်ကိုတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ball နှစ်လုံးတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်တိုင်း arms တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အလျှောက် valve ဟာအပိတ်အဖွင့် လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
အရာရာတိုင်းမှာ limitation ရှိပါတယ်။ ဒါကိုပြန်ထိန်းဖို့အတွက် spring တွန်းကန်အားကို သုံးပါတယ်။ spring ဆိုတာ ဖိထားလေ ပိုပြီးတွန်းကန်လေပါပဲ။ spring length ကို screw နဲ့ ဖိပြီး တိုထားရင် spring ရဲ့တွန်းကန်အားက ပိုများပါလိမ့်မယ်။ screw ကိုလျော့ထားရင်တော့ တွန်းကန်အားလျော့နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းနဲ့ limitation ကို ချိန်နိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်၊ အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အမျိုးမျိုးသော control unit တွေပေါ်နေပါပြီ။ ဒါကအခြေခံပါ။ ကျွမ်းကျင်စွာ adjust လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် maintenance စာအုပ်တွေကို များများလေ့လာပေးပါ။
သူများတွေထက် နောက်ကျနေပြီပဲ။ သင့်မှာရှိနေတဲ့ ခွန်အားလက်ကျန်လေးနဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို လမ်းခင်းပေးကြပါလား။ ခုချိန်မှာ ယူရကောင်းမှန်းမသိရင်တောင် လိုတဲ့တနေ့ ယူနိုင်ကြပါစေဗျာ။
The Following2Users Say Thank You to Little3278 For This Useful Post:
01-03-2009 11:18 AM #5
links for the Electric Governor
The Following User Says Thank You to William Paul For This Useful Post:
01-03-2009 01:36 PM #6
governor အကြောင်းကိုတော့နဲနဲနားလည်သွားပါပြီ၊သူက fuel pump နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်၊
fuel pump နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာအသေးစိပ်လေးလုပ်ပါအုံးဗျာ၊(ကျွန်တော်ကနဲနဲဝေးလို့ပါ)
engine ပိုင်းမှာရေးထားမလားသွားကြည့်သေးတယ်ဗျ၊မတွေ့လို့ပါ။ ???
01-03-2009 03:26 PM #7
Cummin မှာ pressure time governer သုံးပါတယ်။
Internet မှာ စာအုပ် နမည် နဲ့ ရှာကြည့်ပါ။
The Following User Says Thank You to Nay Win For This Useful Post:
01-06-2009 11:35 PM #8
[quote author=တာရာပွလေး link=topic=2685.msg16679#msg16679 date=1230966366]
fuel pump နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာအသေးစိပ်လေးလုပ်ပါအုံးဗျာ၊.......
ဆရာဦးအုန်းမြင့် (ဒီဇယ်) ရေးတဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင် စာအုပ်မှာတော့တွေ့ မိတယ်....။ Fuel Injection Pump အကြောင်းရေးထားတဲ့ Chapter ထဲမှာပါမယ်ထင်တယ်...။
အမှန်တော့ Governor ဆိုတာက Engine အားလုံး လိုလိုမှာပါတယ်ထင်တယ်ဗျ ..။ သူ့ ရဲ့ function က ဆီကျွေးတာ ပုံမှန်လေး
ဖြစ်နေအောင် ( သတ်မှတ်ထားတဲ့ Speed တစ်ခုမှာနော်) လုပ်တာပါပဲ ...။ သတ်မှတ်လည်နှုန်းထက် ပိုမြန်ရင် Governor က ၀ိတ်
တုံး လေး (၂ ခု) က ကားထွက်လာပြီး ဆီ အပေါက်ကို ကျဉ်း သွားအောင် လုပ်ပေးတာပဲ... ။
အကြမ်းဖျဉ်းကတော့ ဒီလောက်ပဲ ဗျ .... ။ တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ အတွေ့အကြုံရှိမှ ပြင်နိုင်လိမ့်မယ် .... ။
The Following User Says Thank You to htinlin For This Useful Post:
03-28-2009 06:04 PM #9
အခုမှအသင်းဝင်ပြီးဖတ်ဖြစ်တာပါ...ေ ဆွးေ နွးထားတာေ တွဖတ်ရတာ ဗဟုသူတရသလို မသိေ သးတာလဲ သိရတာေ ပါ့...ဂါဗနာဆိုတာ အဂ်လိပ်စာအတိုင်း
ေ ပြာရရင်အုပ်ချုပ်သူေ ပါ့...ဒီဇယ်အင်ဂျင်ေ တွကို ကွန်ပရက်ရှင်း အင်ဂနိုက်ရှင်းအင်ဂျင်လို့ေ ခ်ါပါတယ်...compression ignition engine...ဆလင်ဒါအ
တွင်းေ လကို ဖိသိပ်သွင်းလိုက်ပြီးအပူချိန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဒီဇယ်ဆီကိုေ န်ာဇယ်က အမှုန်ေ လးေ တွအဖြစ်ဖွာေ ပးပြီးမီးေ လာင်ေ ပါက်ကွဲကာ ပါဝါ
ရရှိတာပါ...ပါဝါများများရဖိုံ ဒီဇယ်ဆီများများေ ပးရပါတယ်...ေ လစစ်နဲ့ေ လအဝင်ပိုင်းမှာ ပြသနာမရှိရင်ေ ပါ့...ဆီအနဲအများကို ဒီဇယ်ပန့်က လုပ်ေ ပးပါတယ်.
ပလန်ဂျာကေ ပါ့..အဲဒ်ီပလန်ဂျာကို မှ...ခုနဂါဗနာက ထိန်းချုပ်ထားတာပါ...စက်စနိုးတဲ့အချိန်မှာ ဆီပန့်ကို ဆီအများကြီးေ ပးခိုင်းပါတယ်...စက်နိုးတာနဲ့ ဂါဗနာ
ဝိတ်တုန်းက စက်ရပ်တဲ့ ဘက်ကို ဆွဲသွားပါတယ်...အဲဒီမှာ စက်မ၇ပ်ေ အာင်...ကြိုတင်သက်မှတ်ထားတဲ့စက်ပတ်ရည်မှာ စက်ငြိမ်ေ နေ အာင် လီဗာကို ချိန်ထားရပါတယ်...မီးစက်ေ တွမှာေ တာ့ စက်နို့းပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်ပရက်ရှာတက်လာတာနဲ့ သူသက်မှတ်ထားတဲ့ စက်ပတ်ရည်ေ ရာက်ေ အာင်တက်သွားပါတယ်
ဝန်အနဲအများေ ပ်ါမူတည်ပြီး စက်ေ တွက အတက်အကျဖြစ်ပါတယ်.....အဲဒီလိုမဖြစ်ေ အာင် ဂါဗနာက ကစားပြီး ဝန်ေ ပ်ါမူတည်ပြီး စက်ပတ်ရည်ငြိမ်ေ အာင်
ဆီပမာဏကို ထိန်းေ ပးတာပါ.....cummin အင်ဂျင်ေ တွမှာ ဒီဇယ်ပန့်က ဆီလွှတ်ေ ပးပြီးေ န်ာဇယ်ေ တွကို ကမ်က တလုံးချင်းရိုက်တဲ့ ယူနစ် အင်ဂျက်တာ
ေ တွသုံးတာများပါတယ်...ဂါဗနာက electronic governorေ တွ များပါတယ်...စက်ပတ်ရည်ကို sensor က ပို့ေ ပးပါတယ်...စက်ပတ်ရည်မငြိမ်ရင်ေ လ
စစ်ေ လဝ မဝ အရင်စစ်ပါ၊ ပြီး ဆီစစ်ေ တွကို လဲပါ၊ဆီကိုေ လမခိုေ အာင်ချူေ ပးပါ...ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကေ လခိုမှာေ ကြာက်ပါတယ်...ေ လကုန်ေ အာင် ချူပါ..
The Following2Users Say Thank You to zaw moe myint For This Useful Post:
05-14-2009 09:39 PM #10
ကျွန်တော်သိတာ ၁ ခုတော.ပြောပြမယ်နော်။
ပွပွပြောတဲ့ test run တုန်းက engine က Diesel or natural gas engine ?
ဘာလို.လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ cummin engine က diesel နဲ. natural gas engine ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
diesel ဆိုရင်အဖြစ်များတာက ko zaw moe myint ပြောခဲ့သလိုပဲဗျ air filter တွေ diesel filter တွေကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးပေးသင့်တယ်။
diesel filter လဲပြီးရင်လဲလေကုန်အောင်ချူပေးသင့်တယ်။
natural gas engine ဆိုရင်တော့ပထမဆုံး gas pressure ကိုစစ်ကြည်.ပါ။
pressure နဲရင်လဲ gas နဲ. air နဲ. ratio မမျှပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော. engine အသံက လေသံပါပြီး ဘုတ်ဘုတ် ဘုတ်ဘုတ် ဆိုပြီးမော်တော်မောင်းသံလိုမြည်ပြီး power ထိုးကျသွားတတ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော.ဗျာဝပ်ရှော.ဆရာတော်တော်များများကတော. diesel engine ထွေပြီဆိုရင် governer ကိုခေါင်းစဉ်တပ်ကြတယ်ဗျ။
ပြီးမှ governer လုပ်ရင်း filter တွေ ကို ၁ ခါ တည်းလဲ ပြစ်တတ်ကြတယ်။
diesel engine က air filter တွေ fuel filter တွေ engine oil တွေ ပုံမှန်လဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ထွေခဲပါတယ်။
heat ကိုလဲသတိထားပေါ့ဗျာ။တော်ကြာ heat တအားတက်ပြီး gasket တွေပေါက် bearing တွေဖမ်းဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။
engine သံအတက်အကျဖြစ်တိုင်း governer ကြောင့်လို.တရားသေမမှတ်ယူသင့်ပါဘူး။
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့နှလုံးသားတံခါးကို ထပ်မခေါက်ပါနဲ.တော့
The Following User Says Thank You to rememberance For This Useful Post:
dozer 's basic hydaulic circuit system များအကြောင်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျား
By Aung Kyaw Soe 1 in forum လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာပညာ
PSP game အကြောင်းသိချင်လို့ပါ....
By SDZ in forum အခြားအခက်အခဲများ
Last Post: 07-24-2009, 03:33 PM
bat file အကြောင်းသိချင်လို့ပါ
By garfield2009 in forum နည်းပညာဆိုင်ရာတွေ မေးမြန်းကြရအောင်
LED မီး သီးလေးအကြောင်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ
By mr.stone.08 in forum စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ